VaBiti Vanoti Nyika Haina Mari yeSarudzo
Chikunguru 05, 2013
WASHINGTON — Gurukota rinoona nezvemari, VaTendai Biti, vanoti kunyange hazvo dare repamusoro soro rakati sarudzo dziiitwe musi wa31 Chikunguru nyika haina mari yacho.
VaBiti vanoti Zimbabwe inoda mari inosvika mamiriyoni zana nemakumi matatu nemaviri emadhora yekuita sarudzo. Asi sachigaro weZimbabwe Electoral Commission, Amai Rita Makarau, vanoti vanoda mari inosvika mamiriyoni zana nemakumi matanhatu nemana emadhora kuitira kuti basa iri riitwe nemazvo.
VaBiti vanoti vari kutarisira kuti vachaita musangano wechimbi chimbi nemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, pamwe nemutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, kuti vazeye kuti vowana kupi mari yekuti vaite sarudzo.
VaBiti vanoti mazuva apera vakambogarazve pasi vakataura nezvenyaya iyi kusanganisira kutsvaga mari kubva kumangoda uye kumasangano akaita seElectoral Institute of Southern Africa kana kudzokerawo kuUnited Nations.
Divi reZanu-PF muhurumende yemubatanidzwa richitungamirwa negurukota rezvemitemo, VaPatrick Chinamasa, rakaramba rubatsiro rweUnited Nations vachiti inoda kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika yeZimbabwe.
Asi VaBiti vanoti VaMugabe vave kuti kana zvichibvira vanofanira kutaurazve neUnited Nations.
Hatina kukwanisa kunzwa divi raVaChinamasa sezvo vange vasiri kudavira nhare mbozha yavo.
Mukuru wesangano reElections Resource Centre, VaTawanda Chimhini, vanoti nyaya yekuti sarudzo dzakachena zviroto nenguyava yasara.
Hurukuro naVaTafadzwa Chimhini